China Manual Road Road yekumaka Mashini fekitori uye vanotengesa | ACE MACHINERY
ACE yaigona kupa mhando yepamusoro yemagetsi yekumaka muchina. Ruoko Push yekumaka Machine ndeimwe yeakakosha michina ye thermo-yakanyungudika kutara. Hucherechedzo hunhu hunotsamira pakadzikama kwemuchina furemu uye neinoshanda nzvimbo yekumaka hopper, iyo inoratidza mutsauko mukuita kwemuchina.
Thermoplastic Road Marking Machine inoshandiswa pakumaka mitsara inoratidzira (mitsara yakatwasuka, mitsetse ine mitsara, miseve yekutungamira, tsamba uye zviratidzo) munzira yepamusoro, guta mugwagwa, kupaka mota, fekitori uye imba yekuchengetera. Iyo ine maviri mamodheru emaoko Push uye otomatiki imwe (injini inotyairwa).
Ruoko Push Chichatara Machine (Screed mhando)
Injini Manual imwe, hapana injini
Zviyero 1200 mamirimita * 900 mamirimita * 900mm
Output chinzvimbo About 1500m / h yeyakajairika imwechete inopfuurira tambo
Paints ukobvu 1.2-4mm
Chikumbiro Upamhi 100mm, 150mm, 200mm
Kupisa kwekuchengetedza kwependi 170-220 ℃
LPG humburumbira zvakajairwa 15kg，10kg
Chichatara upamhi 50,80,100,120,150,200,230,250,300mm, nezvimwewo. Mushini uyu unonyanya kukodzera kutara mitsetse yemabhiza mazana mana nemakumi mana.
Tangi inokwana thermoplastic 105kg
Rinoshanda Ramba wakanyunguduka pendi inodziya uye maka mutsetse.
Yese huremu hwemuchina 125kg
Unyanzvi hwegirazi mabhesi bhokisi 25kg
Nzira yekuparadzira bead Gear Zvifambiswa, zvaitika Clutch
Shanda neye preheater Hongu
Kushanda kwezuva nezuva kushanda 1000 m2
Inogona kushongedza ine inowedzera mutyairi, inowedzera ndiro, inowedzera chigaro？ Boosting Dhiraivha (ine Injini)
Zvinyorwa Zvikuru zveThermoplastic Road Marking Machine:
Kuburikidza nekugadzirisa giravhiti, yakawedzera gumbo repamberi, iyo yekumaka Machine inogadzikana kupfuura yechinyakare kana uchimaka 450mm mbizi kuyambuka.
Kuburikidza nekudzokorora kwegiravhiti bvunzo, dzorerazve shaft nyowani, iyo yekumaka muchina yakareruka zvikuru, yakaderedzwa opareta's kushanda kusimba. Saka mabasa ekumaka anova nyore uye nekubudirira.
Yekumakisa hopper's inoshanda renji yakadzikiswa kubva pa 300mm kusvika 200mm, zvakanyatsojeka, zviri nyore kudzora, nekudaro matambudziko akadai sekunonoka hopper kubvisa uye kusaenzana kupedzisa chiratidzo pamucheto kunogadziriswa. Iyo yakawanda-poindi inotsvedza block block kudzvanya chimiro inoshandiswa kudzivirira zvinhu zvekuvuza muroyi zvinowanzoitika kune zvakafanana zvigadzirwa nekuda kwemaviri akasimba akasvinwa mativi uye hombe deformation iri pakati pechigadzirwa zvakafanana.
1.Zve iko kuendesa?
A: Zviri sarudzo yako. Kazhinji, tinokurudzira kutumira kwegungwa kunopa mitengo inonzwisisika. Zvakare, zvezvipenga zvikamu, zvinogona kunge zviri muFEDX, DHL uye yavo yepasirese expression.
3. Ndinogona kugadzirisa ukobvu hwemutsara here? Uye sei?
4.Iwe unogona kuburitsa yakagadziriswa muchina?
A: Hongu, tinogona. Isu tiri vagadziri ve thermoplastic mugwagwa wekumaka muchina muGuangzhou City ..
Pashure: Yese- mune-imwe nzira yekumaka muchina
Zvadaro: 65kgs ine 10.5kn vibrating simba Plate Compactor
GW42E-GW50E Otomatiki mhando
Simbi bhaa aricheke GQ40
45mm 13 / 4inch Japanese mhando kongiri vibrator S ...
GW40A 2.2KW Chinyorwa mhando